Dacwad ka dhan ah Farmaajo oo la diyaarinayo kadib markii QM ay xaqiijisay in askar Soomaali ah la geeyey Dagaalkii Tigray | Biyoguurenews.com
Home Wararka Dacwad ka dhan ah Farmaajo oo la diyaarinayo kadib markii QM ay...
Dacwad ka dhan ah Farmaajo oo la diyaarinayo kadib markii QM ay xaqiijisay in askar Soomaali ah la geeyey Dagaalkii Tigray
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Abshir Maxamed Axmed ayaa hogaaminaya gal dacwadeed laga gudbinayo Farmaajo.
Guddoomiye Abshir ayaa sheegay in gal dacwadeedka ka dhanka ah madaxweynaha waqti xileedkiisu dhamaaday lagu baadi-goobayo dhalinyaradii tobabarka uu Farmaajo ugu qaaday Eritrea.
“Waxaa go’aansaday in aan horkaco dacwad ka dhan ah maamulka Farmaajo oo lagu baadi-goobayo caruur muddo 2-Sano ka badan ku maqan Eritrea,” ayuu yidhi.
Abshir ayaa tallaabadan u qaaday si ay cadaalad u helaan waalidkii dhalay dhalinyaradaas, islamarkaana ay u helaan warbixin ku saabsan xaaladooda, kadib markii ay dowladda iska dhago tirtay baaqyo kala duwan oo arrintaas la xidhiidha.
Waxa kale oo uu qaadistooda ku tilmaamay mid sharci darro ah, isagoo ugu baaqay umadda iyo hey’adaha xuquuqul insaanka iney arrinkan wax ka qabtaan.
Dowladda waqtigeeda uu dhamaaday ee uu hogaanka u hayo Farmaajo ayaa gebi ahaanba iska indho saabtay baaqyo kala duwan oo kasoo qaar kamid ah goleyaasha dowladda iyo cabashooyin dhowr ah oo ay jeediyeen waalidiinta dhalinyaradaas.
Dacwada Abshir uu hogaaminayo ayaa kusoo beegmaysa saacado un kadib warbixin ay heshay Warbaahintu oo la filayo inuu dhawaan soo saaro guddiga Xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay oo ku saabsan ku lug lahaanshaha Ciidamada Eritrea ee dagaalka Tigray-ga, ayada oo lagu dhex xusay in ciidamo Soomaali ah ay kamid ahaayeen ciidamadii ka dagaalamay gobolkaas.
Warbixinta QM ayaa lagu xusay inuu ergeyga gaarka ah ee xuquuqul insaanka helay macluumaad muujinaya in askarta Soomaalida laga soo qaaday xeryihii ay tababarka ku qaadanayeen oo ku yaalo Eretria, isla markaasna la geeyey goobaha dagaalka ee Tigray-ga.
Warbixinta oo ka kooban illaa 17-bog oo laga soo bandhigay qeybtan yar ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamadaas marka ay ka gudbayeen xuduudda Itoobiya iyo Eretariya ay wehlinayeen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa Militariga ee Eretariya.
“Marka laga soo tago wararka sheegaya ku lug lahaanshaha ciidamada Eriteriya dagaalka Tigrayga, wakiilka gaarka ah wuxuu sidoo kale helay macluumaad iyo warbixino sheegaya in askarta Soomaalida laga raray xeryihii tababarka militariga ee Eritrea lana geeyay jiida hore ee Tigrayga, halkaas oo ay ku wehlinayeen ciidamada Eritrea markii ay ka gudbayeen soohdinta Ethiopia,” ayaa lagu yidhi warbixinta.
“Sidoo kale waxaa ixtiraam mudan in ciidamada Soomaalida ah ay joogeen agagaarka magaalada Aksum,” ayaa sidoo kale lagu yidhi warbixinta.
Warbixinta ayaa waxaa lagu xusay in Dowladda Soomaaliya ay beenisay ka qeyb qaadashada askarta Soomaaliya ee dagaalada Tigray-ga, iyadoo guddi ka socda baarlamaanka Soomaaliya ay ka dalbadeen madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sharaxaad ku saabsan halka ay ku dambeeyeen Ciidamadii Soomaaliya ee loo diray Eritrea.
Arrintaan ayaa kusoo aadeyso xilli Waalidiinta askarta ay Dowladda Soomaaliya geysay dalka Eretria ay ku jiraan xaalad murugo ah iyadoo inta badan askartaas aan lagu heyn nolol iyo geeri, waxayna waalidiinta muddooyinkii dambe dhigayeen banaanbaxyo ay ku dalbanayaan in meel lagu sheego ilmahooda.
Previous articleFreddie Figgers: Ninka milyaneerka ah ee yaraantiisa qashinka lagu dhex tuuray
Next articleEritrea oo Mareykanka ku eedaysay inuu ‘hurinayo’ colaadda gobolka Tigray ee Itoobiya